Nuru Bestie • Fanosorana vatana sy fanorana NuRu
Salama tompokolahy. Raha mitady mafana, mahatsikaiky, madio sy malina ianao, dia izaho no gal!
Tsy miezaka ny ho tanora kokoa noho ny toetrako aho, manana hatramin'ny taonako. Tombony ho ahy ary tombotsoan'ny fiainako!
Makà fotoana miaraka amina vehivavy matotra, mahafinaritra ahy ny mamorona fotoana tadidinao foana!
Manome bodyrub feno aho, manomboka amin'ny loha ka hatrany amin'ny rantsan-tongony, avy eo manosotra menaka voanio ny tenako mba hiomanana hidina amin'ny vatanao efa malama, avy eo ny flip, manao famotsoran-tànana vita tanana, ary famaranana mahafinaritra aho, mampiasa teknika amin'ny anao soroka sy tenda izay tena mahatonga anao hahatsapa fa manana ny volanao ianao. Fotoana 70 minitra ity.
Tongava madio sy mahitsy. Tsy manavaka aho.
Tongava amin'ny traikefa, ary afaho aho, ary miaraka amiko, apetraho amiko izao ny fotoananao!
Mitete ny hamandoako amin'ny fitsidihanao! Ampianaro aho hikorisa, ho safidy.
Manokana ny timers voalohany aho. Izaho no tianao hampitahanao ny sisa rehetra. Nametraka fenitra ho anao aho ary mitondra anao any amin'ny faritra mampionona izay tsy tokony hanahirana anao. Ny toerana misy ahy dia malina be, mifono ao amin'ny faritra tsara, ary trano mitokana.
Tsindrio ny kiheba hevitra ary zahao izay zarain'ny mpanjifa sasany.
Ity no lazain'ny sasany amin'ny mpanjifako:
“Tena tsara ianao ary midina etỳ an-tany dia nahatsapa izany avy hatrany aho”
TEXTING no fomba tsara indrindra hifandraisana amiko amin'ny valiny haingana
Ampidiro / 70 minitra - $ 250
777 Alameda St, Los Angeles, CA 90021, Etazonia
Alatsinainy: 9: 00 AM - 5: 00 PM
Talata: 9: 00 AM - 5: 00 PM
Alarobia: 9: 00 AM - 5: 00 PM
Alakamisy: 9: 00 AM - 5: 00 PM
Zoma: 9: 00 AM - 5: 00 PM
Asabotsy: 9: 00 AM - 5: 00 PM